Sidee Tawreeda Muuse wax uga sii sheegay Ciise? - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Injilku wuxuu caddeynayaa in iskutallaabta iyo sarakicidda Ciise ay udub dhexaad u ahayd qorshaha Ilaah. Dhab ahaantii 50 maalmood ka dib sarakicidda Ciise, Peter, oo ahaa hoggaamiyaha saaxiibbadiis, ayaa si cad u sheegay bayaankan ku saabsan Ciise Masiix:
24 Isaga Ilaah baa sara kiciyey, oo ka furfuray xanuunkii dhimashada, maxaa yeelay, dhimashadu ma xajin karin
Falimaha Rasuullada 2: 23-24
Farriintii Butroos ka dib, kumanaan ayaa rumaystay oo farriinta waxaa isku duubay dad badan oo adduunka oo dhan ku nool – dhammaantood iyagoon wax khasab ah ku jirin. Sababta aqbalaadda baahsan waxay ahayd qoraallada Tawreedka iyo nebiyada Zabur oo la qoray boqollaal sano ka hor. Dadku waxay baadheen Qorniinkaan si ay u eegaan inay dhab ahaantii sii sheegeen imaatinka, dhimashada iyo sarakicidda Ciisse Masiix. Qorniinkaas oo kale oo aan is -beddelin ayaa jira maanta si aan sidoo kale u baari karno oo aan u aragno in ay waafaqsan tahay “qorshihii ulakac Eebbe iyo ogaalnimadiisa” sida Butros ku dhawaaqay. Halkan waxaan ku soo koobaynaa qaar ka mid ah waxa dhegeystayaashii Injilkii ugu horreeyey ay ka arkeen Tawreedka, iyagoo dib ugu noqonaya ilaa Aadam iyo abuurista lixda maalmood ah, sida ay
“… maalin kasta loo baari jiray Qorniinka …”
Falimaha Rasuullada 17:11
Waxay si fiican u baadheen Qorniinka maxaa yeelay farriinta rasuulladu waxay ahayd wax la yaab leh oo ku cusub iyaga. Waxaan cuqdad u qabnaa inaan diidno farriimaha ku cusub dhegaheenna ee la yaabka leh. Dhammaanteen tan baan samaynaa. Laakiin, haddii farriintani ay xagga Ilaah ka timid, oo ay diideen, waxaa ku soo degi lahaa digniinta Suuradda al-Ghashiyah (Surah 88-The Overwhelming).
Hase yeeshee Ruuxii xaqa ka jeedsada oo Gaalooba (ku soo celi xaqa).Eebana wuu caddibi Caddibaadda u wayn.Xagganagayna u soo noqon (khalqigu).Annagaana xisaabin.
Suuradda al-Ghashiyah 88: 23-26
Waxay ogaayeen in habka la hubo ee lagu go’aamin karo in farriintan aan la garanayn ay ka timid xagga Alle iyo in kale inay ahayd in lagu tijaabiyo farriinta ka soo horjeedda qoraallada nebiyada. Tani waxay ka ilaalin lahayd ciqaabta diidmada farriinta Alle. Waxaan xigmad u leenahay inaan ku dayano tusaalahooda oo sidaas ayaan u baari doonaa Qorniinka si aan u aragno haddii farriinta dhimashada iyo sarakicidda Ciise Masiix horay loogu sii qoray qoraalladii hore. Waxaan ku bilaabaynaa Tawreedka.
Ogaanshaha Eebbe wuxuu soo degay bilowgii Tawreedka iyo Quraanka
Bogga koowaad ee Tawreedka waxaan ka arki karnaa in maalmaha Isa al Masih PBUH iyo allabarigiisa uu Eebbe hore u ogaa. Dhammaan Kutubta Quduuska ah (Tawreed, Zabur, Injiil & Qur’aan) waxaa jira laba toddobaad oo keliya oo laga sheekeeyo dhacdooyinka maalin kasta oo is xigta ee toddobaadka. Toddobaadka ugu horreeya ee noocaas ahi waa xisaabta sida Eebbe wax walba ugu abuuray lix maalmood gudahood oo lagu qoray labada cutub ee ugu horreeya Tawreedka. U fiirso sida Quraanku xoogga u saaray lixda maalmood ee Abuuridda.
Eebihiin waa kan ku Abuuray Samooyinka iyo Dhulka Lix Maalmood, dabadeed dul ahaaday Carshiga, wuxuu ku Daboolaa Habeenka Maalinta, wuuna raacaa (midba ka kale) si Deg dega, Qorraxda, Dayaxa iyo Xidigahana waxaa loo Sakhiray Amarka Eebe, Eebaana Abuuridda iyo Amarkaba iska leh, waxaana waynaaday «oo Khayrbatay» Eebaha barbaariya Caalamka.
Suuradda Al-Caraf 7:54
Waana Eebaha ku Abuuray Samooyinka iyo Dhulka iyo Waxa u Dhexeeya Lix Maalmood, markaana kor ahaaday Carshiga (Si u Cununta), ee Warso Cid xogo gaal ah.
Suuradda Al-Furqaan 25:59
Eebe waa ka ku abuuray Samooyinka, iyo Dhulka iyo waxa u dhaxeeya Lix maalmood dhexdeed, markaasna ka kor ahaaday Carshiga «si u cunanta» idiin mana sugnaanin Eebe ka sokow wali(gargaare) iyo shafeece midna, ee miyeydaan wax xusuusanayn.
Suurat As-Sajdah 32: 4
Dhabahaan annagaa Samaawaadka iyo Dhulka iyo waxa u dhaxeeya ku abuura lix maalmood, wax daal ahna nama taabanin.
Suuradda Qaf 50:38
Eebe waa kan ku abuuray Samaawaadka iyo Dhulka Lix Maalmood , markaasna Carshiga ka kor ahaaday(si isaga u qunta), wuxuuna ogyahay waxa Dhulka gali iyo waxa ka soo bixi, waxa Samada ka soo daga iyo waxa kori, Eebana waa idinla jiraa meelkastood ku sugantihiinba, waxaad camal falaysaanna Eebe waa arkaa.
Suuradda Al-Xadiid 57: 4
Toddobaadka kale ee la diiwaangeliyo dhacdooyinka maalinlaha ah waa toddobaadkii ugu dambeeyay ee Ciise Masiix. Ma jiro nebi kale, ha ahaadeen Ibraahim, Muuse, Daa’uud, iyo Muxammad ha lahaadeen waxqabadyo maalmeed hal toddobaad oo dhammaystiran. Koontada toddobaadka abuurka oo dhammaystiran furitaanka Tawreedka ayaa halkan lagu bixiyay. Waxaan soo marnay dhacdooyinka maalinlaha ah ee toddobaadkii ugu dambeeyay Ciise Masiix.
Jadwalkani wuxuu dhigayaa maalin kasta labadan isbuuc is garab socday si loo barbardhigo.
Maalinta todobaadka Todobaadka Abuuritaanka Todobaadkii ogu dambeysay Ciise
Maalintii 1 Waxaa jira mugdi oo Ilaah ayaa yidhi, ‘Iftiin ha ahaado’ wayna ahatay. Waxaa mugdi ku jiray iftiin. Masiixa wuxuu galayaa Yeruusaalem wuxuuna dhahayaa “Waxaan dunida u imid anigoo ah nuur …” mugdi baa ku jira
Maalintii 2 Ilaah wuxuu dhulka ka soocay samadaha. Allah wuxuu kala soocaa dhulka iyo samooyinkaIsa wuxuu kala soocaa waxyaalaha dhulka iyo jannada isagoo nadiifinaya Macbadka sida meel lagu tukado
Maalintii 3 Ilaah wuxuu yidhi meel banaani ha ahaato biyaha dhexdooda. Ciise ayaa hadlaya oo geedka berdaha ah ayaa dhulka ku engegay. I
Ilaah Mar labaad ayii yidhi, dhulka ha soo bixiyo geedo,wayna ahaatay. Ciise wuxuu ka hadlayaa iimaanka oo buuraha u wareejin kara badda. Eebbe mar kale ayuu ku hadlaa ‘Dhulku ha soo saaro dhir’ oo sidaas bay ahayd
Maalintii 4 Eebbe wuxuu ku hadlaa ‘Iftiimmo cirka ha ku jiraan’ oo qorraxda, dayaxa iyo xiddiguhu waxay u soo baxaan iftiiminta cirka . Isa wuxuu ka hadlayaa calaamadda soo laabashadiisa dhulka – qorraxda, dayaxa iyo xiddigaha ayaa madoobaanaya. I
Maalintii 5 Eebbe wuxuu abuuraa dhammaan xayawaannada duulaya, oo ay ku jiraan xayawaanada dinosaurka duulaya = dawacooyinka Shaydaan, masduulaagii weynaa, wuxuu ku soo degayaa Yuudas si uu u garaacoa Masiixa
Maalintii 6 Ilaah wuu hadlaa oo xayawaankii dhulku way noolaadaan. Xoolaha wananka Kormaridda ayaa lagu gowracay macbudka.
‘Sayidka Rabbiga ahu … dulalka sankiisa Aadan wuxuu kaga afuufay neeftii nolosha’. Aadan wuxuu bilaabay inuu neefsado neefsado “Oohin weyn, Ciise ayaa neefsaday.” (Markos 15: 37)
Eebbe wuxuu Adam ku meeleeyay Beerta Ciise wuxuu doortay inuu si xor ah u galo beerta Getseemene Isa chooses freely to enter the Garden of Gethsemene
Aadam waxaa looga digay Geedka Aadam waxaa looga digay Geedka aqoonta Wanaagga iyo Sharka habaar. . Isa is nailed to a tree and cursed. (Galatians3:13)
Lama arag xayawaan ku habboon Aadan. Qof kale ayaa daruuri ahaa allabaryada neefka Kormaridda kuma filna Qof baa loo baahnaa. (Cibraaniyada10: 4-5)
Eebbe wuxuu hurdo aad u weyn ku riday Aadam Ciise wuxuu galay hurdada geerida
Eebbe wuxuu nabar ka sameeyaa dhinaca Aadam oo uu ku abuuro Xaawo-Aadan aroosadiis Nabar baa lagu sameeyey dhinaca Ciise Isaga allabarigiisa Ciise wuxuu ku guuleystaa aroos – kuwa isaga leh. (Muujintii21: 9)
Maalintii 7 Ilaah wuxuu ka nastay Shaqada. Maalintaa waxaa loo aqooday Quduus. Ciise Masiix dhimashaduu ku nastay
Dhacdooyinka maalin kasta ee labadan toddobaad waa sida muraayada midba midka kale. Waxay leeyihiin Isku dheeli tirnaan. Dhamaadka labadan toddobaad, midhaha ugu horreeya ee nolosha cusub ayaa diyaar u ah inay dillaacaan ama kacaan oo ku tarmaan abuur cusub. Aadam iyo Ciise Masiix waa Muuqaalo oo midba midka kale yahay. Quraanku wuxuu Ciise Masiix iyo Aadam ka yiray:
Suuradda Al-Cimraan 3:59
Injilku wuxuu ka sheegayaa Aadam taas … Aadan, oo ah tusaalaha kan imanaya.
Rooma 5: 14
22 Siday dhammaan Aadan ugu wada dhintaan, sidaas oo kalaa dhammaan Masiixa loogu wada noolayn doonaa
1 Korintos 15: 21-22
Marka la isbarbar dhigo labadan toddobaad waxaan aragnaa in Aadam uu ahaa qaab rogaal u ahaa Ciise Masiix. Ma Alle ayaa u baahnaa inuu qaato lix maalmood si uu u abuuro koonka? Miyuusan ku samayn karin amar keliya? Haddaba muxuu u abuuray siduu sameeyay? Muxuu Eebbe u nastay maalintii toddobaad isagoo aan daalin? Wuxuu wax walba u sameeyey habkii iyo amarkii uu yeelay si hawlaha ugu dambeeya ee Ciise loogu sii sugo falalka maalinlaha ah ee toddobaadka Abuurista. Tani waxay si gaar ah u tahay Maalinta Lixaad. Waxaan si toos u arki karnaa qaabka ereyada. Tusaale ahaan, halkii uu si fudud u dhihi lahaa Ciise wuu dhintay’ Injilku wuxuu leeyahay ogu dambeeyntii wuu ‘neefsaday’, oo si toos ah ugu noqonaysa Aadan oo helay ‘neefta nolosha’. Qaabka noocan ah laga bilaabo bilowgii wakhtiga wuxuu ka hadlayaa ‘ogaanshaha hore’, sida uu Butroos sheegay ka dib sarakiciddii Ciise Masiix.
Sawiradii xigay ee Tawreeda
Tawreedku wuxuu markaa diiwaangeliyaa dhacdooyin gaar ah wuxuuna dejiyaa caadooyin u adeega sawirro tilmaamaya allabariga soo socda ee Ciise Masiix. Kuwaas waxaa loo bixiyay si ay nooga caawiyaan fahamka hore u ogaanshaha qorshaha Alle. Waxaan eegnay qaar ka mid ah dhacdooyinkan muhiimka ah.
Jadwalka hoose ayaa soo koobaya iyaga, oo xiriir la leh Calaamadahaas waaweyn oo la diiwaangeliyey in ka badan kun sano kahor Ciise Masiix.
Calaamadda Tawreeda Sida ay u muujinayso qorshaha allabari ee soo socda ee Ciise Masiix
Calaamadda Aadam Markii Eebbe ka hor yimid Aadan ka dib caasinimadiisii ​​Wuxuu ka hadlay hal ilmo oo lab ah oo ka imaan doona (kaliya) haweeney (sidaas darteed dhalasho bikrad ah). Faracani wuxuu burburin lahaa Shaytan laakiin isaga laftiisu wuu ku dhufan lahaa hawsha
. Calaamadda Qabil & Haabiil Waxaa loo baahday allabari dhimasho ah . Qabiil wuxuu u huray khudaar (oo aan naf lahayn) laakiin Haabiil wuxuu soo bandhigay nolosha xayawaanka. Arrintaasna Alle ayaa aqbalay. Tani waxay muujisay qorshaha allabari ee Ciise .
Calaamadda allabari Ibraahim Wiilku wuxuu ahaa inuu dhinto laakiin daqiiqaddii ugu dambeysay ayaa wankii la beddelay si uu wiilku u noolaado. Tani waxay sawirtay sida Ciise ‘Wanka Ilaah’ uu naftiisa u bixin lahaa si aan u noolaano. . This pictured how Isa al Masih the ‘Lamb of God’ would sacrifice himself so we could live.
Calaamadda Iidda Kormaridda ee Muuse Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qorshaha Alle ayaa la muujiyaa marka baraarka la sadqeeyo maalin cayiman – Kormaridda. Fircoonkii Masar, oo aan allabari wan u soo marin dhimasho. Laakiin reer binu Israa’iil oo allabari u bixiyey wan way ka badbaadeen dhimasho. Boqolaal sano ka dib Isa al Masih waxaa la sadqeeyay isla maalintaas ee kalendarka – Kormaridda..
Calaamadda allabariga Haaruun Haaruun wuxuu dejiyaa allabaryo u gaar ah xayawaanka. Reer binu Israa’iil ee dembaabay waxay bixin karaan allabari si ay dembigooda ugu kafaaro guddaan . Laakiin dhimasho allabari ayaa loo baahday. Kaliya Wadaaddada ayaa bixin kara allabaryo ku hadlaya magaca dadka. Tani waxay rajaynaysay Ciise Nasiix doorkiisa Wadaadnimo oo naftiisa u bixin doona allabari ahaan.
Sababtoo ah Tawreedkii Nebi Muuse NNKH ayaa si cad u tilmaamay imaatinka Nebi Ciise al Masih waxay ka leedahay: (Cibraaniyada 10: 1) Oo Ciise al Masih wuxuu u digay kuwa aan rumaysan himiladiisa: (Yooxanaa 5: 43-47) Isa al Masih wuxuu kaloo ku yiri xertiisii ​​inay ka caawiyaan inay fahmaan hadafkiisa
Nebigu wuxuu si cad u sheegay in Kitaabka Tawreedka oo keliya ahayn, laakiin qoraalladii ‘Nebiyada iyo Sabuurrada’ ay iyaguna isaga ku saabsan yihiin. Waxaan halkaan ku eegnaa. Halka Tawreedku u adeegsaday dhacdooyin tusaalooyin u ahaa imaatinkiisa, nebiyadan dambe waxayna si toos ah u qoreen geeridiisa soo socota iyo sarakiciddiisa sida akhrinta.
Halkan waxaan ku fahmeynaa sida loo helo hadiyadda nolosha weligeed ah ee uu noogu deeqay Ciise masiix .
Tags:isa al masih wuxuu wax ku sii sheegay tawradahasida tawraadku u soo dejiyay masih